Liiska xusuusta ee u soo guurista Finland - InfoFinland
U soo guurista Finland > Liiska xusuusta ee u soo guurista Finland
Marka aad Finland u soo guurto, waan in qabataa hawlo badan oo waxqabad ah. Liiska xususta ee qofka Finland u soo guuraya ayaa ka caawinaya arrimaha muhiimka ah ee guurista la xiriira.
Kahor u soo guurista Finland
U soo guurista Finland kaddib
Miyaad u baahan tahay oggolaanshaha joogitaanka Finland?
Muwaadiniinta wadamada Midowga Yurub iyo Wadamada Waqooyiga Yurub uma baahanogogolaanshaha joogitaanka Finland. Haddii aad tahay muwaadin wadan kale, waa in aad ogolaanshaha joogitaanka Finland codsataa kahor inta aadan Finland imaanin. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqrisaa bogagga InfoFinlandi Muwaadiniinta Midowga Yurub ama Aan aheyn muwaadin EU.
Si aad Finland ugu soo guurto, waa in aad heysataa lacagta nolosha oo kugu filan. Marka aad codsaneyso ogolaanshaha joogitaanka ama diiwaangelinta xaqaada joogitaanka, waa in aad caddeysaa in dhaqaalahaada nolosha ee Finland uu dammaanad-qaadan yahay. Haddii aad Finland u imaanaysid arrimo la xiriira shaqo ama ganacsi waa inaad caddaysid in shaqada ama ganacsiga ay kaa soo galayso lacag noloshaada ku filan. Haddii aad u soo guurto xubin qoyskaad kamid ah oo jooga Finland, inta badan waxaa sidoo kale qofka Finland deggan looga baahanyahay in uu heysto hanti ku filan isaga iyo xubinta qoyskiisa ee Finland u soo guureysa.
Ogeysiinta guuritaankaada saraakiisha dalka aad ka timid
Marka aad Finland u soo guurto si aad u degto, xusuusnow, in aad guuritaankaada ku wargeliso saraakiisha dalka aad ka soo guurtay. Ka soo guurista dalkaadu waxay saamayn ku yeelan kartaa tusaale ahaan ammaanka bulshada, hawlgabka iyo canshuuraha. Qabashada hawluhu waa ay fududaanaysaa, haddii uu macluumaadkaadu wakhtiga la socdo.
Alaabada lagala soo guuro midowga Yurub dhexdiisa
Haddii aad Finland uga soo guureysid wadan ka mid ah wadamada Midowga Yurud, lagaagama baahna inaad alaabadaada khaaska kuu ah oo aad soo qaadanaysid ka bixiso canshuuraha kastamka ama canshuuraha qiimaha la socda. Sidoo kale lagaagama baahna inaad ogeysiis la xiriira alaabadaada siiso kastamka (tulli).
Ogow, in khamriga iyo sigaarku aysan ku jirin alaabada lala soo guuro oo canshuur la'aanta ah. Keenida khamiriga iyo sigaarka waxaa loo sameeyey xadayn gooni ah.
Macluumaad ah waaxda talo-bixinta kastamka oo telefoonkeedu yahay + 358 (0)295 5201 ama bogga internetka ee kastamka. Talo-bixinta kastamku wuxuu ku adeegayaa luuqadaha Finnishka, Swidishka iyo Ingiriiska.
Alaabta lagala soo guuray meelaha ka baxsan Midowga Yurub
Haddii aad ka soo guureysid meel ka baxsan Midowga Yururb, lagaagama baahna inaad alaabadaada khaaska kuu ah oo aad soo qaadanaysid ka bixiso canshuuraha kastamka ama canshuuraha qiimaha la socda. Si kastaba ha ahaatee waa inaad alaabadaada ogaysiis ka siisaa shaqaalaha kastamka ee dalka Finland.
Alaabaha lala soo guuro waxaa loo arkaa tusaale ahaan:
qalabyada guriga iyo alaabaha guriga
baaskiilada iyo mootooyinka
baabuurta sida gaarka ah loo isticmaalayo iyo rimoorada
Keenista dalka Finland alaabooyinka dibada lagala soo guuroFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush
Keenista gawaarida sidii alaab lala soo guuray oo kale
Marka aad baabuur sidii alaab lala soo guuray oo kale u keeneyso Finland waa inaad ogeysiisaa kastamka. Haddii aad keeneyso baabuurkaada Finland waa inaad rajistereysaa islamarkaasna aad ka bixisaa canshuurta baabuurta (autovero), ka hor inta aadan ku isticmaalin waddooyinka.
Waxaa macquul ah in gaariga loo isticmaalo si ku meel-gaar ah, ka hor inta aan canshuurta gawaarida la bixin. Laakiin tan waxaa shardi u ah, inaad Maamulka canshuurta sii ogaysiiso istimaalka gaariga (auton käyttöönottoilmoitus). Sidoo kale gaarigaagu waa inuu leeyahay caymislka waddooyinka (liiknnnevakuutus) dalka Finland oo shaqaynaya. Haddii gaariga laga keenay meel ka baxsan wadamada Aagga Dhaqaalaha reer Yurub, waxaad sidoo kale u baahan tahay ruqsada meel ka qaadiga gaariga kahor inta aadan gaariga isticmaalin. Ruqsada meel ka qaadiga gaariga waxaa bixiya qaar kamid ah goobaha shaqada ee kastamka iyo xarumaha gawaarida jeeg gareeya. Gaarigaaga dalka Finland kuma isticmaali kartid ilaa inta aad ka samaynaysid ogaysiiska isticmaalka aadna ka soo qaadanaysid ruqsada meel ka qaadiga gaariga.
Haddii aad dooneyso in aad weydiiso talo ku saabsan canshuurta baabuurta iyo geysiiska isticmaalista baabuurka, waxaad wici kartaa adeegga telefoonka ee Maamulka canshuurta:
+358 (0)29 497 151 (iswidhish)
+358 (0)29 497 152 (ingiriis)
Gaadiidka oo sidi alaabta lala soo guuroFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush
Dal keenista xayawaanada gurijoogtada ah
Haddii aad doonaysid inaad Finland u soo qaadato xayawaan gurijoog ah, waa inaad horay u sii ogaataa sharciyada la xiriira keenida xayawaanada. Inta badan xayawaananada waxaa laga rabaa tusaale ahaan talaalo la cayimay. Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira shucuucda keenista xayawaanada dalka Finland, waxaad ka helaysaa Hay’adda cuntada (Ruokavirasto).
Ka keenida xayawaanka wadan EU:da ka mid ahFinnish | Iswidish | Ingiriis
Ka keenida xayawaanka wadan EU:da ka baxsanFinnish | Iswidish | Ingiriis
Shirkadaha alaabada rara
Shirkadaha bixiya adeegyada guurinka qaarkood waxay bixiyaan adeegyo guuritaan oo wadan ka wadan ah. Shirkadahaas ayaad kireysan kartaa sidii ay alaabtaada kuu qaadaan wadan ka wadan sidoo kale haddii aad doonaysid waxaad ka codsan kartaa adeega xir-xirista iyo baakadaynta iyo waliba qalabka wax lagu baakadeeyo.
Kharashka guuritaanku wuxuu ku xiran yahay hadba, meesha aad ka soo guureysid iyo alaabtaadu inta ay le'eg tahay. Waxaa laga yaabaa in farqi wayn u dhexeeyo qiimaha shirkadaha guuritaanka ee kala duwan, sidaas awgeed waxaa haboon inaad is barbar dhig ku sameysid qiimahooda.
Kaalmada guuritaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Norwey | Danish
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub islamarkaasna aad doonayso in aad wax ka badan muddo 90 maalmood joogto Finland, waa in aad diiwaangelisaa xaqaada joogitaanka. Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri bogga InfoFinland Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
Guriga iyo caymiska guriga
Inta badan dadka wadanka u soo guurey waxay bilowga degaan guryo kiro ah. Waxaa haboon in raadinta guryaha kirada ah waqti loo qabsado, ugu yaraan hal bil. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi: Guriyeynta.
Markii aad guri heshid waxaa habboon inaad gashid caymiska guryaha (kotivakuutus). Caymiska gurigu wuxuu magdhaw kaa siinaya tusaale ahaan waxyeelada soo gaarta qalabka guriga iyo waxyeelada soo gaarta alaaboyinkaaga kale. Caymiska guryaha waxaa iibiya shirkadaha caymiska. Macluumaad dheeraad ah waxad ka heli kartaa bogga bangiga macluumaadka qaybtiisa Nolol maalmeedka dalka Finland.
Summada aqoonsi ee finnishka
Haddii lagu siiyo ogolaanshaha degitaanka ee Finland, waxaa si otomaatig ah laguugu diiwaangelinayaa nidaamka macluumaadka dadka. Waxaad islamarkaas heleysaa aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka. Aqoonsiga shakhsiyeed waxaad sidoo kale gudaha Finland ka heli kartaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow (Digi- ja väestötietovirasto) ama xafiiska canshuuraha. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene.
Haddaad u soo guurto Finland si rasmi ah, waxaa laguugu diiwaan gelinyaa in degaankaagu yahay Finland. Deegaankaaguna wuxuu noqonayaa degmada, aad ku nooshahay. Mar haddii degan tahay degmadaasna, waxaad xaq u leedahay adeegyada ay bixiso degmadaas, sida tusaale adeega daryeelka caafimaad ee dadweynaha. Waxaad ka ogaan kartaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow, in lagugu diiwan gelin karo degaankaaga inuu noqdo Finland. Ka aqriso wixii dheeriya bogga InfoFinlandi Guri degmo ee gudaha Finland.
Diiwaangelinta ajaanibtaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Diiwaangelinta ajaanibta ee xafiiska canshuurahaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Marka aad Finland u soo guurto, waa in Kelada ka codsataa Kaarka Kelada. Waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay helitaanka manfacyada bulshada, haddii Finland u deggantahay si joogto ah islamarkaasna aad buuxiso shuruudaha kale ee lagu helo manfacyada. Xaqaada manfacyada bulshada waxaa la qiimaynayaa, marka aad codsato. Haddii aad Finland ka shaqeyso, laakiin aadan si rasmi ah u deganeyn, waxaa laga in aad xaq u leedahaya manfacyada bulshada qaarkood.Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ammaanka bulshada Finland wuxuu ku jira bogga InfoFinlandi Ammaanka bulshada Finland.
Ammaanka bulshada ee u soo guuraha FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis
Koontada ama xisaabaadka bangiga
Waxaad u baahan tahay koonto bangi si aad u xalisatid arimaha lacagaha la xiriira. Markii aad furanaysid koontada bangiga, waxaad u baahan tahay baasaboor ama waraaqo kale oo cadayn ah. Waxaa haboon inaad is barbar dhigtaa adeegyada bangiyada kala duwan ay bixinayaan iyo qiimaha, si aad u heshid wadiiqo adiga kuu raqiisan.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan furidda akawnka bangiga waxad ka heli kartaa bogga bangiga macluumaadka qaybtiisa Nolol maalmeedka dalka Finland.
Haddii aad shaqeyso ama aad tahay ganacsade, waxaad u baahan tahay kaarka canshuurta (verokortti) Finiishka. Haddii aad mardhow u soo guurtay Finland, waxaad kaarka canshuurta ka heleysaa xafiiska canshuurta. Haddii aad joogto u deggantahay Finland, Mamaulka canshuurta ayaa kuu soo kaarka canshuurta sannad kasta bisha Janaayo. Faahfaahin dheeraad ah ka eeg bogga InfoFinlandi Kaadhka cashuurta.
Haddaad degan tahay maagalada shardi ma aha inaad yeelato gaari. Gaadiidka daweynuhu si fiican ayuu uga shaqeeyaa Finland. Tareenada iyo laymanka basaska ku dhowaad meel kasta oo Finland ah ayaad ugu safri kartaa. Magaalooyin badan sidoo kale waxaad ku tegi kartaa duulimaad. Magaalooyinka waa weyn iyo kuwa u dhow waxaa ka jira gaadiid deegaaneed si fiican u shaqeeya. Gaadiidka deegaanku waa inta badan basas. Faahfaahin dheeraad ah ka eeg bogga InfoFinlandi Gaadiidka gudaha Finland.
Kaarka wadista baabuurta
Haddii aad haysatid kaarka gawaarida lagu wado oo laga bixiyey mid ka mid ah wadamada waqooyiga yurub, wadamada midowga yurub ama wadamada ETA, markaas sidoo kale leysinku wuu ka shaqaynayaa dalka Finland. Waxaad u badeli kartaa leysin Finnish ah, waa haddii aad si rasmi ah u degantahay Finland.
Haddii aad haysatid kaarka gawaarida lagu wado oo laga bixiyey wadan kale oo ku jira wadamada sixiixay heshiiska jidadka ee Geneva ama Wien, markaas waxaad leysinka gaari ku wadan kartaa dalka Finland gudihiisa ugu badnaan labo sano. Kaddib marka laguugu qoro nidaamka macluumaadka dadka ee Finland, waxaad heysataa labo muddo labo sano ah oo aad ku beddelato kaarka wadista baabuurta ee dal shisheeye laga bixiyay. Haddii aad wakhti hore beddelan kaarka, waxaa qasab kugu noqonaysa inaad Finland ku sameyso imtixaanka darawalka (imtixaan qoraal iyo wadis ah).
Haddii aad haysatid kaar laga bixiyey wadan aan ka mid ahayn wadamada sixiixay heshiiska jidadka ee Geneva ama Wien. Sannad ayaad ku wadan kartaa baabuur kaarkan marka adiga laguugu qoro nidaamka macluumaadka dadka ee Finland. Haddii aadan kaarka beddein, waxaa qasab kugu noqonaysa inaad Finland ku sameyso imtixaanka darawalka.
Leysinkaada waxaad goobta adeegga ee Ajovarma ugu beddelan kartaa leysinka Finnishka.
Ku haysashada dalka Finland kaarka darawalnimada ee wadamada dibada laga soo qaatayFinnish | Iswidish | Ingiriis
Finland gudaheeda waxyaabo badan ayaa lagu xalin karaa xiriirka internetka. Waxaa haboon inaad khadka internetka soo daysatid sida ugu dhaqsaha badan, markii aad Finland u soo guurtid.
Bogga bangiga macluumaadka qaybtiisa Nolol maalmeedka dalka Finland waxad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan furashada internetka.
Khadadka internetka iyo telefoonadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii aad dalka Finland ka iibsanaysid khadka telefoonka, waxaad helaysaa telefoon lambar oo Finnish ah. Khadka telefoonada waxaa bixiya shirkado badan.
Waxaad kaloo iibsan kartaa khadka la buuxsado (Pre-paid-liittymä). Kaaraka Pre-paidka waxaa ku jira qiimo go’an oo horay loogu buuxiyey, kaasoo aad ku wacan kartid meeshii aad doonaysid. Khadka Pre-paidka waxaad ka iibsan kartaa tusaale ahaan kioskiyada, qaar ka mid ah dukaamada supermarketyada ama internetka.
Finland waxay leedahay adeegyo caafimaadka dadweynaha. Adeegyada caafimaadka dadweynaha waad adeegsan kartaa, haddii aad ku tahay Guri degmo ee gudaha Finland. Daryeelka caafimaadka dadweynaha waa rugta caafimaadka degmada waana ka qiimo jaban tahay rugaha caafimaadka ay shaqsiyaadku leeyihiin.
Haddaad rabto inaad dhakhtar ka qabsatid balan, la xiriir rugta daryeelka caafimaadka. Haddaadan xaq u laheyn adeega daryeelka caafimaadka dadweynaha, waxaad la xiriiri kartaa dhakharada bareefadka ah.
Faahfaahin dheeriya oo Daryeelka caacimaadka Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Caafimaadka.
Luuqadaha Finnishka iyo Swidishku waa luuqadaha rasmiga ah ee dalka Finland. Aqoontooda waxay kaa caawinaysaa inaad fahamtid bulshada cusub, waxayna kuu sahlaysaa xalinta arrimaha. Barashada luuqada Finnishka ama Swidisku waxay ku xiran tahay, labada luuqadood hadba midda looga hadlo magaalada aad degan tahay. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Luqada Finnishka iyo Swidishka.
Xafiiska shaqada iyo dhaqaalaha ayaad caawimaad uga heleysaa shaqo raadinta. Shaqada waxaad ka raadsan kartaa internetka iyo joornaalada. Sidoo kale shaqo waxaad ku heli kartaa adigoo si toos ah ula xiriira shaqo bixiyaha aad xiisaynaysid. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shaqo ka raadinta Finland InfoFinlandi Shaqo ka helista Finland.
Waqtiyada firaaqada iyo hiwaayadda
Macluumaadka la xiriira suurto galnimada waqtiyada firaaqada iyo hiwaayadaha waxaad ka helaysaa bogga InfoFinlandi Waqtiga firaaqada.
Macluumaadka Finland ee ajaaniibta loogu talagalayIngiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 17.09.2021 Boggan war-celin ka soo dir